Eyona Ntlanzi intle kwaye enemibala eMhlabeni: Intlanzi yaseMandarin | Ngeentlanzi
Uninzi lwabantu olunama-aquariums, ekuphela kwento abayifunayo kukuba nendawo nabo ezona ntlanzi zintle kwaye zinemibala. Into abayifunayo kukuba nedama lokonwabela imibala kunye nokuhamba kakuhle kweempiko zabo xa bequbha emanzini.
Kungenxa yesi sizathu sokuba namhlanje sikuzisele enye yeendumiso 10 yeyona ntlanzi intle kwaye inemibala emhlabeni. Ndithetha ngentlanzi yaseMandarin.
El Intlanzi yaseMandarin, Yintlanzi yemveli yoLwandlekazi lwePasifiki, ngakumbi kwiiRyukyu Islands ezikumazantsi elizwekazi laseAustralia, kwaye ikwabizwa ngokuba yintlanzi yengqondo ngenxa yokuba olu hlobo lweentlanzi lufumana impembelelo phakathi kwabo bayithandayo.
Luhlobo lwentlanzi yasemanzini ethanda ukusabela emanzini angenzulu kangako njengamachibi ombane. Ngamanye amaxesha kunzima ukufumana kuba ziisentimitha ezi-6 ubude.
Intlanzi yaseMandarin ibonakaliswa ngokuba nomzimba omde, amehlo aqaqambileyo kunye namaphiko emqolo. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba umzimba wakhe uphela ugcwele umbala, apho kunokuqaqanjiswa imivimbo eluhlaza, orenji, tyheli, mnyama, yonke ixutywe ngasemva kwithoni enye, eluhlaza okwesibhakabhaka. Kungenxa yoluhlu lwayo lwemibala kwaye ngenxa yemigca le ntlanzi inayo le ntlanzi ifumana igama le-Mandarin fish, kuba iyimibala yeelokhwe ezinxitywa ngamagosa e-China yasebukhosini kwaye ezaziwa igama lamaMandarin.
Ukuba ufuna ukuba nentlanzi yale ntlobo kwi-aquarium yakho, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba banesimo esomeleleyo nesibalaseleyo, ke oko akukhuthazwa ukuba ngaphezulu kwamadoda amabini akhuliswe kwi-aquarium efanayo. Nangona kunjalo, inkunzi enye inokwabelana ngesithuba kunye namabhinqa ambalwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi olwandle » Eyona ntlanzi intle kwaye enemibala eMhlabeni: Intlanzi yaseMandarin